Agromart | Agricultural Marketplace Nepal भूईंकटहर खेती गर्ने तरिका – Agromart
Q 1. भूईंकटहरलाई कस्तो किसिमको हावापानी उपयुक्त हुन्छ?
Q 2. यसको खेती समुद्र सतहबाट कति उचाई सम्म गर्न सकिन्छ ?
Q 3. यसको खेतीको कतिसम्मको तापक्रममा उपयुक्त हुन्छ ?
Q 4. यसको लागि वार्षिक वर्षा कतिसम्म भएमा उचित हुन्छ?
Q 5. यसलाई कस्तो किसिमको माटोमा लगाउँदाराम्रो हुन्छ ?
Q 6. माटोको पि.एच. मान कतिसम्म भएमा राम्रो हुन्छ ?
Q 7. नेपालमा कुन कुन जातहरुको खेती भइरहेको छ?
Q 8. जाईन्ट क्यूजातको भूईंकटहरका विशेषताहरु के के छन् ?
Q 9. भूईंकटहरको क्वीन जातको पनि विशेषता बताई दिनु हुन्थ्यो कि?
Q 10. भूईंकटहरको बिरुवा कसरी उत्पादन गरिन्छ ?
Q 11. भूईंकटहरको क्राउन भनेको के हो ?
Q 12. भूईंकटहरको स्लिप भनेको के हो बताई दिनु हुन्थ्यो कि ?
Q 13. भूईंकटहरको सकर भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ ?
Q 14. भूईंकटहरकोबिरुवा कसरी लगाईन्छ ?
Q 15. भूईंकटहरलाई प्रति रोपनी जमीनमा कति मलखादको जरुरी पर्दछ?
Q 16. भूईंकटहरको बिरुवालाई सिंचाईको आवश्यकता हुन्छ?
Q 17. भूईंकटहर बगैंचामा झारपात नियन्त्रणलाई किन महत्वपूर्ण मानिन्छ?
Q 18. भूईंकटहरको झारपातलाई कसरी नियन्त्रण गरिन्छ?
Q 19. भूईंकटहरको बगैंचा भित्र पनि अन्तरबाली लगाउन सकिन्छ?
Q 20. एउटा भूईंकटहरको बिरुवा कति पटक फुल्छ र फल दिन्छ ?
Q 21. भूईंकटहर फल कस्तो अवस्थामा टिप्नु पर्दछ?
Q 22. भूईंकटहरको उत्पादन प्रति रोपनी कतिसम्म हुन्छ ?
Q 23. भूईंकटहरलाई ग्रेडिङ्ग गर्न जरुरी हुन्छ?
Q 24. ढुवानीको समयमा फलहरु नाश नहुन् भन्नका लागि प्याकेजिङ्ग कसरी गर्नु पर्दछ ?
Q 25. भूईंकटहरलाई कसरी भण्डारण गर्न सकिन्छ?
Q 26. भण्डारण गरिएका फलहरुलाई एकनाससँग पकाउने कुनै उपाय छ?
Q 27. भूईंकटहरमा लाग्ने सबैभन्दा हानिकारक कीरा मिलीबगले कसरीक्षति पुर्यारउँदछ?
Q 28. यस कीराको आक्रमणबाट बिरुवालाई कसरी बचाउन सकिन्छ ?
Q 29. भूईंकटहरमा रोगको प्रकोप कस्तो छ?
Q 30. गुभो कुहिने रोग कसरी लाग्दछ र यसको पहिचान कसरी गर्न सकिन्छ?
Q 31. यस रोगबाट बच्न कस्ता-कस्ता उपायहरु अपनाउनु पर्ला ?
Q 32. फल कुहिने रोग कसरी लाग्दछ र यसलाई कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ बताई दिनु हुन्थ्यो कि?
Q 33. फल कुहिने रोगबाट बच्नको लागि के कस्तासावधानी अपनाउनु पर्दछ?
यस रोगबाट बच्नको लागि फलको भेट्नोलाई १०% को बेन्जोइक एसिडलाई इथेनलमा तयार गरेर त्यसमा डुबाउनु पर्दछ।
Q 34. भूईंकटहरको फलमा देखा पर्ने सन स्काल्ड विकृतिबाट कसरी बच्न सकिन्छ ?
भूईंकटहरका बोट ढलेमा वा तेर्सिएमा फलमा प्रकाश परेको भाग तथा दक्षिण-पश्चिम तर्फको भाग परिपक्व नहुँदै पहेंलिन्छ। यस्तो समस्याबाट बच्न ढलेको तथा प्रकाश बढी पर्ने फलको भागलाई खर वा पराल वा केराको पात वा भूईंकटहरकै पातले छोपी दिनु पर्दछ। छायाँदार बोट लगाइएको ठाउँहरुमा यस्तो किसिमको समस्या आउँदैन।